Boky fahefatry ny Makabeo - Wikipedia
Ny Boky fahefatry ny Makabeo dia boky ao amin’ny Baiboly ortodoksa an'ny fiangonana any Jeorjia nefa tsy hita ao amin’ny Baiboly hebreo na ny Baiboly katolika sy protestanta izay manasokajy azy ho apokrifa na pseodepigrafa. Mamelabelatra ny lohahevitry ny fanajana ny Lalàna izay manampy ny saina hifehy ny fihetseham-po io boky io. Derainy ny fahafatesan’ireo nanao sorona ny ainy voatantara ao amin’ny Boky faharoan'ny Makabeo. Ny faha maritiora dia endrika isehoan'ny eritreritra mifehy ny fihetseham-po tsy voasaina.
Voaresak'ity boky ity ny fotoana nanombohan’ny fanenjehana ny Jiosy nataon’ny mpanjakan’i Siria, dia i Antiokosy Epifanesy, nefa tsy miresaka ny amin’ny fanoherana nataon’ireo Makabeo izy.
Lohahevi-dehiben’ny boky ny fijalian’ny maritiora (ny Makabeo) izay lazainy fa misolo ny fanompoana tokony hataon’ny firenena jiosy iray manontolo handiovana ny fahotany. Miezaka mampifandrindra ny foto-kevitra platonisiana sy stoisiana amin’ny Lalàna jiosy ity boky ity mba hanehoany fa mifanojo ny fivavahana jiosy sy ny filozofia helenista.
Mino ny tsy feteza-matin'ny fanahy ny mpanoratra, nefa tsy miresaka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Ny fanahy tsara dia lazainy fa hiaina mandrakizay amim-pahasambarana miaraka amin'ireo patriarka sy Andriamanitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Boky_fahefatry_ny_Makabeo&oldid=973554"
Voaova farany tamin'ny 28 Aogositra 2019 amin'ny 05:11 ity pejy ity.